Kedu ka ọnya obi jọrọ njọ dị? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Saddres ọnyá - chọọ ngwọta
Saddres ọnyá - chọọ ngwọta
Kedu ka ọnya obi jọrọ njọ dị?
Fọdụsadulu ọnya anyaotutudị kantụpọ na ndị a na-ebutekarị ntutu isi nje.Akpịrịnalee anyaỌzọdị kaesi na-abụkarị ndị buru ibu ma nanwere ikebụru ụfụ. Maka ụfọdụ ndị mmadụ, isi ihe kpatara mgbu nwere ike bụrụ abrasion nke chaf.
Ogologo oge ole ka ọnya obi na-adịru?
Ọ bụrụ n ’ijide ha n’oge, ha ga - apụ mgbe ụbọchị ole na ole gafere igwe kwụ otu ebe, mana miri emiọnyanwere ike were izu ole na ole, ọ na-ekwu. Gaa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị chọpụta na ha na-alaghachi ugboro ugboro;ikpeazụihe karịrị izu abụọ; ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbu na-abawanye nke ukwuu, ahụ ọkụ na uhie uhie na saịtị ahụ.Ọnwa Ise 17, 2018
Yabụ, lee ihe ị ga-achọ mgbe ị na-agbanwe oche. Site na iweda ihe di elu nke sadulu a, ichoro na whale na bea na-achu gi oge niile. Hey ụmụ nwoke.
Echi, Trainiacs. Mụ na nkịta na-aga ịnyagharị igwe kwụ otu ebe na onye na-azụ ọzụzụ na Zwift ma oge eruola mgbe m nwara ịnyịnya Cobb ndị a. Yabụ ugbu a aga m egosi gị otu esi agbanwe oche na ijide n'aka na ị banyela nha na ihu ọma ị setịpụrụ ka ị banye ebe ị na-enweghị nsogbu ọ bụla na mgbu mgbu. aka.
Ọ ga-akpọrọ gị gaa n'ogige bọọlụ nke nkasi obi. Nke a bụ ihe ị ga-achọ maka mgbe ị na-agbanwe oche. Lelee anụ ahụ a na-abịa nke ọma na igwe kwụ otu ebe.
Tulee ya na akwa Cobb a, enwere nnukwu esemokwu ole na ole. Ọnụọgụ, obosara dị ntakịrị. Echere m na nke a dịtụ obosara.
Number abụọ, rails bụ al. wuru obere oge ma anyị ga-ekwu maka ihe kpatara nke a. Ya mere na na ngwụcha ọ bụ toro ogologo, saa mbara karị, na ọ nwere ike a obere ogologo.
Nke ahụ pụtara na anyị gafere usoro ntọala niile, usoro eserese nrụgide na Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu, iji jide n'aka na akpọrọ m nke ahụ, mana achọrọ m ịbanye na otu ntụpọ ahụ. Ọ bụ ntakịrị aghụghọ karịa ịsị, 'Ọ dị mma, ọ dị mma, aga m atọpụ kposara, wepụ ya wee tinye ya. 'N'ihi na, dị ka ị pụrụ ịhụ, nhazi ahụ dị iche.
Yabụ iwere nha abụọ tupu iwepu ihe mbụ. Nọmba otu. Achọrọ m iji okpu azuokokoosisi n'ihi na ọbụlagodi na njikwa aka tụgharịrị ntakịrị ma ị gapụtụ, ị ka na-agbanye otu ntụpọ ahụ n'ihi na ọ na-atụgharị n'otu ebe.
Site n'ebe ahụ, tụọ ihu imi ihu nke sadulu ahụ n'akụkụ n'akụkụ ala nke mgbatị ụkwụ na elu, ọ bụghị ala nke sadulu ahụ, n'ihi na okpu nwere ike ịgbanwe na ọkpụrụkpụ nke sadulu ahụ, mana ị ga-atụ ya elu nke N'ihu nke sadulu. Yabụ n'ụzọ ziri ezi ebe ahụ mgbe ọ malitere ịdị larịị wee nwaa ịhazigharị nke ahụ site n'ịga n'ihu na azụ na ala na oche nchekwa, ka anyị mee nke ahụ ugbu a, yabụ ihe ị ga - eme, bụ na ị ga - agaghachi na n'ihu nta, na ikpe m mere iru ụzọ na mbụ elu nke sadulu na-esote. Na-ewetara ịdị elu nke sadulu ahụ agbagọ iru, yabụ na ị ga-enwe ụdị nke ị ga-edobe ihe niile tọgbọrọ, yabụ kpatara m ji enwe ọnya ọnya ebe a.
Jide n'aka na ị na-eji mpempe akwụkwọ na-agagharị na ntanetị na-eme ka ị ghara ijide onwe gị na cranking. Cranks? Oh Mgbe ị na-agbaji carbon ị na-egbochi onye ọ bụla ntakịrị, jide n'aka na nha ahụ ziri ezi na ọ bụrụ na ị mee nke ahụ, ị ​​gaghị atụfu nke ọzọ, yabụ ebe m kwesịrị ịgbawa ugbu a, m ga-etinye ma na
Ma ugbu a, nye m otu awa na ntakịrị nke Zwiftand m ga-agwa gị otu m si amasị sadulu Cobb a. (Obi ụtọ dị ụtọ) Do chọrọ ka m laa? - Ee, biko. - Ka ọ dị. - Ndeewo, sir. - The downside of a smart trainer, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ime ihe a niile Zwift stof na a Wahoo kicker mmasị, anyị ga-adị na ebere nke ihe ọ bụla ọzọ na ndụ anyị dị ka internet ọrụ.
Naanị m na-arụ ọrụ ọsụsọ, echere m na m gbafere ịnyịnya ígwè m maka nkeji 20 ma eleghị anya m ka nwere oge iji rụchaa ọrụ a. Ọ dị mma, nkeji iri abụọ na ise, oku ekwentị abụọ ma ọ nweghị ọrụ ịntanetị na bluetooth ka emechara, anaghị m akwọ ụgbọala, enweghị m oge. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ etiti oge ahụ, Taren ga-ewe iwe.
Gwa onwe gị, na nkeji iri abụọ na ise nke ịnya ịnyịnya na 30 nkeji mgbe e mesịrị na ekwentị na ụlọ ọrụ ịntanetị, enwere m ike ịgwa gị na Cobb sadulu adịghị njọ, oche Cobb na-anọdụ ala karịa nke ahụ. Ihe mkpuchi anụ ahụ nke anụ ahụ ebe a adịchaghị elu dị ka ọdụ ụgbọ mmiri Cobb ebe a, na gịnị? John Cobb na-ekwu na ọ na-eme ka ụgbọ okporo ígwè ndị a dị elu karịa ka ha nwee obere ntukwu ujo. Nke a abụghị ikpe na ihe abụọ ndị a, ma John Cobb na-ekwu na na nkezi, ọ na-anwa ịme ohere ị nwere ike ịlaghachi na azụ na ọdụ ụgbọ ala ndị a ogologo oge.
Ọ chọrọ ka ndị na-eme egwuregwu nwee ohere karịa otu ha nwere ike ịkwaga sadulu ahụ, iji mee ka ọ dị mma n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, okporo ụzọ ndị a dị elu ka ha nwee ike irube isi na ogologo oge ka ọ dịrị ha mfe idozi. Mgbe ahụ, ọ na-agbakwunye ihe dị ka gram asaa na sadulu, mana ọ na-asị, 'know maara ihe ọ bụrụ na anyị tinye gram asaa, mana ọ ga-eme ka ọ dịrị onye na-agba ya mfe. 'Nke a bụ nkwekọrịta ọ ga-eme ụbọchị niile.
Enwere obere ọwa na anụ ahụ nke anụ ahụ ebe a, mana ọwa zuru oke na Cobb sadulu a. O doro anya na gịnị ka John Cobb mere mgbe? Ọ malitere ịme akpa ịnyịnya nke ha na-ekwesị ntụkwasị obi ruo taa. Ha ga-ebido site na ihe ndoro-ndoro-ndoro-ya ma mgbe ndi na-agba ha na-agba ya ma nwalee ya, ha jua ndi na-agba ha ebe ha na-enwe nsogbu na ebee ka nsogbu di na ebee ka ebe nsogbu ndi a di, ebe ahu ka ha na-amalite ichapu ihe ha ihe eji eme akwa shaving jide ọtụtụ nsogbu ebe o kwere mee.
Ihe ndozi a dị obere karịa nke a nke mere na ọ ga-atụtụ ntakịrị. Anyịnya ahụ anụ ahụ na-ehulata n'oge ụdị akwa akwa Cobb ahụ, ọ nọ n'akụkụ dị elu. Mgbe ị na-etinye dokwasị, ị chọrọ ka ọ dị larịị dị ka o kwere mee ma ọ bụ dịtụ ntakịrị ala.
Chọghị ịga oke tere aka n’ihi na mgbe ahụ ị ga-amị amị na ihe eji eme nke ọma ga-eme n’ọdụ ụgbọ mmiri gị. Ya mere, ka anyị pụọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịgbanwe ihe ịnọ n’elu gị, nke ahụ bụ ihe ị ga - eme.
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji otu ihe ahụ ma chọọ ịkwaga ya, ị nwere ike were akara nrịbama akara wee kaa akara ebe a na oche oche ị nwere ike ịlele post ahụ ebe ọ kwesịrị ịdị, mana achọrọ m ịgbanwe ọnụ ịnyịnya ọnụ gị nweta nha ndị a ka ị nwee ike ịbịaru ebe ị maara na ọ ga-adị mma. Ugbu a nwee nkụda mmụọ, aga m apụ igwe kwụ otu ebe a, chefuru ya, aga m echefu ya, m ga-agakwuru acupuncturist Peggy. Ọ ga-arapara obere ihe n’ikiri ụkwụ m.
Ọ dị mma, ya mere ana m agbapụ gị ihe na ebe a. Nọmba otu, nke a bụ triathlon Taren HQ ọhụrụ.Ekebeghị m ọganiihu n'etiti ụnụ ụmụ nwoke n'oge a n'ihi na enwere ihe ịtụnanya nye unu niile, a na m eche igosi ya ruo mgbe emechara ya, ọ dị mma.
Mana ebe a, lelee nke a. (egwu dị egwu) Na mita 270 mgbe e mesịrị, m nọ na acupuncturist. Ọ ga-adị ezigbo mma ebe a.
Colọ Coach Pat erughị otu maịl. Ọdọ mmiri ahụ dị otu kilomita site na ọkara K na ntụziaka ahụ. Triathlon Taren HQ dị ihe dị ka mita 5 site na steepụ azụ m.
Ọ bụrụ na m ga-agagharị, m ga-akwaga ebe ebe ihe niile dị n'ime osisi atọ na Iron itoolu ewepụrụ. Mana ma eleghị anya, ọ bụghị oyi tundra. Mkpa na ụkwụ, mmmmmmmm.
Ma abụm nwoke siri ike ka m wee mee ya. Adịghị m ọtọ ebe a, mana m dị mma. Nke a bụ acupuncturist Peggy. - Hi.- Ọ na-elekọta m ma na-akụ m agịga. - Ana m eme (ọchị). - Ma chịrị ọchị.
Ngwa, daalụ, Peggy. - Ehee, Taren. Nwee ọmarịcha ụbọchị. - Ị nakwa.
Ọ bụ eze kachasị mma. Ọ kachasị mma. O wetaara mụ na Kim onyinye onyinye ekeresimesi n’afọ gara aga.
O nyere m triathlon ndị Canada a, lelee ya. Na-agba ọsọ, igwu mmiri, ịrị, ọ bụ eziokwu. Mee ka anụ mmịrị na anụ ọhịa whale na anụ ọhịa na-achụ gị oge niile, ọ bụ ya mere anyị ji esi ike.
Ọ bụ ya mere anyị ji dị jụụ. Ọ dị mma, nke ahụ bụ maka taa. Daalụ acupuncturist Peggy, ị kachasị mma.
Kedu ka ị si edozi ọnya sadulu?
Otu esi edozi akpịrị akwa
Mee ka igwe kwụ otu ebe gị dị mma. Ọ bụrụ na oche gị dị oke elu, úkwù gị na-ama jijiji na mgbatị ụkwụ ọ bụla ma mee ka anụ ahụ gị dị nro gafee imi nkesadulu.
Guzo kwa mgbe.
Họrọ chamois dị larịị.
Họrọ oche na-enye nkwado.
Lube iji belata esemokwu.
Gbaa ọsọ ọsọ.
Kedụ ka ị si agwọ ọnya okike ngwa ngwa?
Ọ bụrụ na ị kwụsị na asadulu akpịrịn'agbanyeghị na ị gbalịsiri ike izere otu, ole na ole dị mfeọgwụgwọnwere ike inye aka belata nhụjuanya. “Ọ bụrụ na ị nweta asadulu akpịrị,emesoọ dị ka ọrịa akpụkpọ anụ obodo ma ọ bụ ntụpọ, jiri ọgwụ mgbochi ma ọ bụ ude antiseptik. Ice nwekwara ike ịba uru iji nyere aka belata ọzịza ọ bụla.Eprel 10, 2014
Sudocrem ọ dị mma maka ọnya sadulu?
Sudocrembụ pụtara pụtara ego antiseptik agwọ ude. A na-ejikarị ya eme ihe iji nyere aka kpochapụ ọkụ ọkụ, eczema, acne na ọnọdụ akpụkpọ anụ ndị ọzọ. Enwere ike iji yasadulu ọnya.
Neosporin ọ dị mma maka ọnya sadulu?
A ude mmanụ dị kaNeosporin(ma ọ bụ nke ọzọ na-ete mmanụ ude atọ na atọ) na / ma ọ bụ Doc's NaturalSadulu mgbuUde nwere ike ime ka usoro ọgwụgwọ ahụ dị ngwa.
Hydrocortisone dị mma maka ọnya sadulu?
NWARASH anaghị emerụ ahụ mgbe a na-agwọ ya, ọ dịghịkwa ihe ọ bụ karịa ntakịrị ncha. Mgbe na-ejiHYDROCORTISONECREAMS - Ude ndị a na-arụ ọrụ nke ọma na akụkụ ndị ọzọ nke ahụ gị maka ọnọdụ mkpali, mana ọ nwere ike ime ka akpụkpọ ahụ dị nro mgbe ejiri ya ihe karịrị otu ọnwa.Ọnwa Ise 26, 2015
Kedu ude dị mma maka akpịrị akwa?
Enwere ọtụtụUden'ahịa, ma ndị a ma ama bụ paw pawude, nappy rashudena Sudocrem (nke nwere zinc oxide). Ndị a dị gịrịgịrịUdenwere ike inyere akana-emeso ọnyá sadulun'abalị ọ bụla ma ọ bụrụ na itinye ha ozugbo na mpaghara ọrịa ahụ.Jun 8, 2017
Olee otú ị ga-esi tufuo a sadulu akpịrị akpụ?
CHAMOIS CREAM: Ọ bụla ezigbo ịnyịnya ígwè ezigbo enyi bụ ezigbo ude chamois. Nke a ga - eme ka esemokwu dị n’etiti akpụkpọ gị na obere mkpirisi gị belata. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana ọtụtụ udenweemgbochi septic na mgbochi mkpali iji nyere aka belata nje bacteria na-ewulite na iwe.Ọnwa Iri 25, 2016